Teratany vahiny iray sendra ireo mpisoloky, andro vitsy lasa izay, no nitaraina fa raha vola madinika 50 euros no natakalony dia tsy nisy afa-tsy 40 euros izany rehefa nisaina.
« Iny izaho miomana hanainga hiala an’i Madagasikara iny mihitsy no nisy olona nanatona, nilaza fa manakalo vola malagasy amin’ny vola madinika « euro ». Natakalo tokoa ny vola, saingy tsy ampy isa izany avy eo. Teo imasoko anefa no nanomezana ireo ka tena gaga mihitsy aho », hoy ity farany.
Ny kapiteny Andrianjatovo Mahefa Henri Daniel, lehiben’ny kaompanian’ny zandary eny amin’ny seranana Ivato dia milaza fa efa nihavitsy ireo mpanakalo vola tsy nahazo alalana ireo.
« Any ivelan’ny seranana izy ireo fa tsy miditra aty anatiny. Efa misy ihany ny voasambotra fa indraindray dia votsotra rehefa eny amin’ny Fitsarana. Ezahina esorina hatrany koa izy ireo, saingy misy hatrany ny miverina.
Ny vahaolana hitako dia ny tokony hametrahana sazy mazava amin’izay fandikan-dalàna iray mitranga eny amin’ny seranana sy ny manodidina », hoy ity tompon’andraikitra ity.
« Tsy miditra aty amin’ny faritra iadidianay polisy mihitsy ireny olona tsy manara-dalàna ireny. Efa fantatray rahateo izy ireny ka avy hatrany dia samborinay ary hatolotra ny Fitsarana », hoy indray ny kaomisera Razafitsiandraofa Brunel, lehiben’ny polisy eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato.